Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: မြန်မာစကား ပြောတတ်ပြီး ပုဆိုးဝတ်ထားယုံနဲ. နိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်။
by Udp Myanmar's Facebook on Saturday, 30 June 2012 at 00:50 ·
ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာရော စခန်းတွေအပြင် ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင် စတဲ့ မြို.တွေမှာရော သွားပြီး တရားမ၀င် နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားတွေ အများကြီးပါ။ သိန်းမကဘူး သန်းချီရှိနေပါသည်။
ထိုင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေလဲ ထိုင်းတွေလိုပဲ ဘောင်ဘီတွေ ၀တ်။ ယိုးဒယားမတွေလိုပဲ စကဒ်တိုတိုတွေဝတ်ပြီး ထိုင်းစကားတွေလည်းပြော ထိုင်းအစားစားတွေပဲ စားနေကြပေမယ့် အဲဒီချက်တွေကြောင့် သူတို.က ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလို. ပြောလို.ရမလား။ ထိုင်းကလဲ ထိုင်းလိုဝတ် ထိုင်းစကားပြောပြီး ထိုင်းအစားအစာတွေ စားတာနဲ. ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအဖြစ် လက်ခံလိုက်မှာလား။ မရပါ။
ထိုင်းမှာ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားတွေ နေတာ တချို.ဆိုရင် အနှစ် ၃၀-၄၀ ရှိတဲ့အပြင် မျိုးဆက် ၃ ခုလောက်တောင် ရှိပြီ အဖေ အမေနဲ. သားသမီးတွေ ထိုင်းမှာ မွေး ထိုင်းမှာ ကြီးပြီး မြန်မာပြည်ကို မရောက်ဖူးတဲ့ ထိုင်းမှာ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒါကို သူတို.ကို ထိုင်းတွေ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ထိုင်းအစိုးရက လက်မခံပါဘူး။
ထို.အတူပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း အမေရိကန်တွေလို Ham Berger တွေစား၊ Sandwish စားတယ်။ ပေါင်မုံ.နှင့် Cheese တွေစားတယ် butter တွေစားတယ်။ ဘောင်ဘီရှည်တွေ ကုတ်အင်္ကျီတွေဝတ် မိန်းကလေးတွေလဲ ဘောင်ဘီတွေ စကဒ်တွေ ၀တ်။ ဘီယာတွေသောက် အင်္ဂလိပ်စကားတွေ ပြောယုံနဲ. တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ Illegal Immigrants တွေ သန်း ၂၀ လောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါတောင် ခန်.မှန်းချက်ပါ အတိအကျ စားရင်ဆိုတာ အမေရိကန်ရဲ့ Immigration လ၀က တွေ အတိအကျ အထောက်အထား စားရင်းတွေမရှိပါ။ ဒီလူတွေကိုလည်း အမေရိကန်အစိုးရက နိုင်ငံသားအဖြစ် ချွင်းချက်မရှိ လက်ခံမှာတဲ့လား။
ဒါကြောင့် တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာတဲ့ Illegal Immigrants တွေကို ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်တိုင်းပြည်ကမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ချက်ချင်း အကြွင်းမဲ့ လက်ခံတာ အသိအမှတ်ပြုတာ မရှိပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာပါစေ။ ၁၀နှစ် အနှစ် ၂၀ မဟုတ်ရင် မျိုးဆက်တွေ ၃-၄ခု ရှိနေရင်လည်း တရားမ၀င် ခိုးဝင်တဲ့ Illegal Immigrants တွေဟာ ဘယ်တော့မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် Automatic Citizenship နိုင်ငံသားအဖြစ် ပေးလိုက်တာ မရှိပါ။
ဒါကြောင့် ရခိုင်ပြည် ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က ဘင်္ဂါလီကုလားတွေဟာလည်း ဘယ်လောက်ပဲ မြန်မာစကား တတ်ပါစေ။ ဘယ်လောက်ပဲ မြန်မာတွေလို ပုဆိုးတွေ ထမီတွေ ၀တ်ပါစေ။ ဘယ်လောက်ပဲ မြန်မာအစားအစာတွေ ရခိုင်စာတွေ စားနေပါစေ ဒါတွေနဲ. သူတို.ကို မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားလို. အထောက်အထားတွေ Evidents ဆိုပြီး ပြလို မရပါ။။
အိန္ဒိယမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေလဲ ကုလားတွေလိုပဲ ဟိန္ဒီစကားတွေ တတ်ကြပါသည်။ ကျပါတီနဲ. ရိုတီး- Roti ကိုလည်း ဆွဲကြပါသည်။ ကျာရီ ကျာရီနဲ. ကုလာ လက်ဖက်ရည်ကိုလဲ စွဲနေပြီး ကုလားပြည်က ဘောင်ဘီရှည်တွေ ကုလားဝတ်စုံ ပန်ဂျာပီ ၀တ်ရုံတွေလဲ ၀တ်ကြပါစေ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချက်နဲ. ရွှေမြန်မာတွေ ချင်းတွေ ကချင်တွေဟာ အလိုလိုနဲ. ကုလားပြည်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်မသွားပါဘူး။
ဒါ့ပြင် ဘင်္ဂါလီတွေ ပုဆိုးဝတ်တာကို မြန်မာတွေလိုပဲ လို. ပြောလို.မရပါ။ အိန္ဒိယပြည် West Bengal နဲ. Assam ပြည်နယ်က Gawahait-ဂ၀ါဟာတီမြို.တွေ Sichar-စီချာမြို.တွေက မူဆလင် ဘင်္ဂါလီကုလားတွေလဲ လုံချည် ၀တ်ကြသူတွေပါပဲ။ မြန်မာပြည်သားတွေလို ပုဆိုးတွေကို ချုပ်ပြီး ၀တ်တာ မဟုတ်ပဲ ပြန်.ကြီးအတိုင်း မချုပ်ဖဲနဲ. ၀တ်နေကြတာမို. ဘင်္ဂါလီကုလားတွေ လုံချည်ဝတ်တာဟာ တကယ်တော့ အသစ် အဆန်းမဟုတ်ပါ။ လုံချည်ကို ကုလားလို ဟိန္ဒီလိုလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ခေါ်တာမို. မြန်မာတွေ ပြောတဲ့ လုံချည်ဟာ ဟိန္ဒီဘာသာစကားတွေ ပါလိတွေ ဆန်စခရစ်တွေက ဆင်းလာတာနဲ. တူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘင်္ဂါင်္လီတွေက ပုဆိုးပဲ ၀တ်ဝတ် ထမီပဲ ၀တ်ဝတ် မြန်မာမဟုတ်ဘူး ပရိတ်ကြီးပါ ရွတ်ရွတ် မြန်မာ ထမင်းပဲ စားစား ဒါတွေက အဓိက မဟုတ်ပဲ ဒီအချက်တွေ ထောက်ပြပြီး သူတို.ဟာ မြန်မာပြည်သား ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ဟာ လက်တွေ. မဆန်ပါ။ ။ ဒါမျိုးကို လက်ခံတာက ခပ်ညံ့ညံ့ UNHCR ၀န်ထမ်းတွေလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ မြန်မာစကားပြောတတ်တာ။ မြန်မာလို ၀တ်တာ။ မြန်မာပြည်ရောက်ဖူးတာ မြန်မာအစားစာပဲ စားတာနဲ. မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်တွေပါလို. ဆိုပြီး လက်ခံနေတာ UNHCR ရုံးတွေပဲ ရှိတာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်တဲ့ အချုပ်အခြာနိုင်ငံတခုဖြစ်တာမို. မြန်မာပြည်ရဲ့ အာဏာစက်ကို UNHCR ရုံးက ထုတ်ပေးတဲ့ Refugee Certificate BU # နဲ. ချေဖျက်လို. မရနိုင်ပါ။
တကယ်လို. ဒီ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို စာနာပါတယ် သနားပါတယ် ညာတာပါတယ်ဆိုတဲ့ Christian Solidarity World Wide က အဖြူကောင် Mr. Benedict Rogers နဲ. ရိုဟင်ဂျာအရေး လိုက်ပြီး ဖွနေ မွှေနေတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်သူ အဖြူမ Chris Lewa တို.လို လူတွေကိုလည်း ရှင်းရှင်းပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ သနားရင် နင်တို.ပဲ ခေါ်ထားလိုက်ပါ။ အားလုံးကို။ အဲဒီသူတွေကို နင်တို.ဆီမှာပဲ Sponsor ပေးပြီး အပီးခေါ်ထားလိုက်ပါ။ တို. မကန်.ကွက်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူတွေကို Illegal Immigrants တွေအနေဖြင့် ဆက်ပြီး သဘောထားနေရမှာ ဖြစ်ပြီး တချိန်ချိန်မှာ သူတို.က ခေါ်ထား ခေါ်ချင်သူတွေ ရှိရင် Third Country Resettlement အစီအစဉ်တွေနဲ. ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ရွှေ.ပြောင်းသာ အခြေချပါ။ မြန်မာပြည်သားတွေက သာဓု ခေါ်နေမှာ သေခြာပါသည်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာစကားပြောလို. မြန်မာလို. ၀တ်လို. မြန်မာလို အစားအစာတွေ စားနေလို. သူတို.ကို မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် လက်ခံရမယ်ဆိုတာ ဒီခေတ် မရပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လူက နည်းပြီး မြေနေရာတွေက ပေါတော့ နယ်စပ်ဒေသလို နေရာမျိုးတွေမျာ တော်ရုံ တန်ရုံနဲ. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက သွားပြီး မနေကျပါ။ ဒါတွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တဖက် နိုင်ငံသားတွေက မြန်မာပြည်ထဲ အစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်ရောက် နေထိုင် အခြေချပြီး ကျူးကျော်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဘင်္ဂလားနယ်စပ်တင် မဟုတ်ဘူး အိန္ဒိယ နယ်စပ်နဲ. ထိစပ်နေတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးနယ်တို. ကချင်ပြည်နယ်တို.ဖက်မှာ ဆိုလည်း အခုအထိ မြေလွတ် မြေရိုင်းတွေ လူတွေ မနေတဲ့ နေရာတွေ တောတွေ တောင်တွေ အများကြီးပဲ။ ဒါကြောင့် အစိုးရက အရင်က ဆရာစံမြို.သစ်တို. အောင်ဇေယျမြို.သစ်တို. တနံမြို.သစ်တို. လုပ်ပြီး Population Pressure ကို ကာကွယ်ဖို. လုပ်ခဲ့သော်လည်း စနစ်တကျ စီမံခန်.ခွဲတာ မဟုတ်တော့ အကြံကောင်းပေမယ့် လက်တွေ. မအောင်မြင်ဘူး။ ဒီတော့ အိန္ဒိယဖက်က နာဂသူပုန်တွေ Kukki သူပုန်တွေက မြန်မာမြေထဲလာပြီး နေရာဟာ ကျူးကျော်ပြီး တပ်စွဲထားတာတွေဟာ တရားဝင်ရော တရားမ၀င်ရောပေါ့။
ကလေးမြို.နယ် ဘုတ်ကန်မြို.အနောက်ဖက် ၁၀ မိုင်လောက် ဝေးတဲ့ တောင်ကြောဆိုရင် ဒေသခံ ရွာသားတွေတောင် တောင်ပေါ်အထိ မတက်ရဲဘူး ကသည်း Manipurii သူပုန်တွေက တောင်ကြောတွေမှာ ဘိန်းခင်းတွေ စိုက်ထားလို. လာတဲ့သူတွေကို သတ်ပစ်တယ် ပြသနာရှာလို. ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ဖြစ်ပေမယ့် လက်နက်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယ သူပုန်တွေကို ကြောက်နေရတာလေ--- ဒါကြောင့် ဘင်္ဂါလီကုလား သင်ခန်းစာကို အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွား- National Interests and National Security အမျိုးသားလုံခြုံရေး သတိတွေနဲ. ကိုင်တွယ်ပြီး ကြိုတင် ကာကွယ်ဖို. လိုမည်။
မဟုတ်ရင် အိန္ဒိယက ကသည်းတွေကပါ တချိန်ချိန်မှာ ဒါ တို.မြေ ဒါ တို.နယ် တို.လည်း တိုင်းရင်းသားတွေပါလို. လာအော်နေဦးမယ်။ ။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:25
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: မြန်မာစကား ပြောတတ်ပြီး ပုဆိုးဝတ်ထားယုံနဲ. နိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်။ . All Rights Reserved